🥇 ▷ Waxaad hadda ku raaxeysan kartaa Legend of Zelda qaabka hal abuurka ee Fortnite ✅
Waxaad hadda ku raaxeysan kartaa Legend of Zelda qaabka hal abuurka ee Fortnite
Halyeeyga Zelda, taasi waa qaybinta ugu horeysa ee loo yaqaan ‘franchise’, waa mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee warshadaha isla markaana fursad kasta oo lagu bixiyo bixinta waa mid fiican. Sida saxda ah, cinwaanada leh qaybo hal abuur leh ayaa u adeegi jiray inay abuuraan wax laxiriira adventures Link-ga hadana hada waxay u weecatay dhanka hal abuurka Fortnite.
Toddobaadkan, taageere ah Halyeeyga Zelda iyo xamaasadda habka hal-abuurka ah Fortnite Wuxuu soo bandhigay nooca ugu dambeeya ee mashruuca kaas oo uu doonayay inuu dib ugu soo celiyo horyaalkii ugu horreeyay ee Nintendo franchise iyada oo laga eegayo aragtida iyo suuragalnimada ay bixiyeen qaybaha ciyaarta Epic Games. Sidaa daraadeed heerka, oo leh lambar 2326-3456-6999, wuxuu muujinayaa metelaadda gaarsiinta ugu horreysa ee Halyeeyga Zelda, oo leh khariidad ballaaran, 9 godad oo ay ka buuxaan qatar iyo qaybo qaar halkaasoo xirfaddu ay tahay farqiga u dhexeeya nolosha iyo dhimashada, iyo waliba meelaha leh halxidhaalaha.
Sidoo kale, marka lagu daro aruurinta 8-da qaybood ee Triforce, ciyaartoydu waa inay sahamiyaan gees kasta oo raadinaya 30 qadaadiic, haddii ay rabaan inay dhammaystiraan heerka 100%. Sida laga soo xigtay abuuraha heerkan, mustard Plays, tacaburku waa waxa ka soo baxa hamigiisa Halyeeyga Zelda iyo habka hal abuurka ah Fortnite.
Maxaad u maleynaysaa heerkan inuu waxyooday Halyeeyga Zelda?
Nooga sheeg faallooyinka oo halkan ku raac, LEVEL UP.